स्नातकमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र खर्चिलो इन्टर्नसिप :: सुरज पराजुली :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्नातकमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन र खर्चिलो इन्टर्नसिप
सुरज पराजुली बिहीबार, वैशाख २९, २०७९, ०७:००:००
नेपालमा सन् २००० बाट नै पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेशनल ओपेन कलेजले पहिलो पटक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन विषय स्नातक तहमा पठनपाठन सुरु गरेको थियो। अस्पताल तथा अन्य स्वस्स्थ्य संस्था र स्वास्थ्य परियोजनाहरुको व्यवस्थापकिय ज्ञान र सीपमा अभिवृद्धि गर्ने यस विषय अहिले भने पोखरा विश्वविद्यालयका ६ वटा संस्थागत कलेजहरुले पढाउँदै आएका छन्। स्नातक तहमा पढाइ हुन थालेको २२ वर्ष भैसक्दा पनि बजारमा यस विषयको बारेमा थाहा हुने मान्छे भने कम नै भेटिन्छ। बिस्तारै अस्पतालको प्रशासकिय र व्यवस्थापकिय कामको लागि निजि अस्पतालहरुले भने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन उतिर्ण गरेका जनशक्ति हरुलाई खोज्न थालेका छन्। केही सरकारी अस्पतालले पनि कतै कतै अस्पताल व्यवस्थापकको करारमा पदपूर्ति गर्नको लागि आह्वान गरेको भने देखिन्छ।
अब कुरा गरौँ यस विषयको कोर्स संरचनातिर,
म एक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन पढिरहेको अन्तिम सेमेस्टरको विद्यार्थी हुँ। बिगत ४ वर्षदेखि ८ सेमेस्टर सम्म पढ्दै गर्दा राम्रो अनुभव पनि बटुलिरहेको छु। साधारण व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, सामुदायिक अनि जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनका विषयहरु मिश्रित रुपमा पढ्दै गर्दा रमाइलो पनि महसुस भयो। नेपालको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा धेरै कसरत गर्नुपर्ने बेलामा यस्ता विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिको भने अवश्य खाँचो देखिन्छ। शैक्षिक संस्थाले कुशल ढङ्गले अध्यापन गराउने हो भने यी विषय पढेर उत्पादन भएका जनशक्तिले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली दर्बिलो बनाउछन् भने कुरामा दुईमत नहोला। यस विषयको प्रचार प्रसार तथा महत्व सबै सरोकारवालाहरुलाई भने बुझाउन अझै कठिन भएको देखिन्छ।
४ वर्षे ८ सेमेस्टरको यो कोर्स जम्मा १३३ क्रेडिट आवरको रहेको छ। जसमा फाउण्डेसन र कोर व्यवस्थापनका १६ ओटा बिषय छन्, स्वास्थ्य र अस्पताल व्यवस्थापनका २३ ओटा विषय छन्, ३ वटा इन्टर्नसिप र एउटा हेल्थकेयर प्रोजेक्ट रहेको छ। अस्पताल निर्माण योजना, अस्पतालका विभिन्न विभागिय व्यवस्थापन अनि सामुदायिक एवम् जनस्वास्थ्यका विषयहरू समाहित छन्। समग्रमा हेर्दा एउटा कुशल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञान र सिप दिने विषयहरु छन्।
अब म यो कोर्स को इन्टरनशिप को बारेमा चर्चा गर्छु,
कोर्स अवधिभर तेस्रो, पाचौँ र आठौँ सेमेस्टर गरी ३ ओटा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक इन्टर्नसिप ३ क्रेडिट आवरको रहेको छ। यी इन्टर्नसिप अस्पताल र स्वाथ्य कार्यक्रम चलाईरहेका स्वास्थ्य संस्थामा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। इन्टर्नसिप मैले भने खर्चिलो महसुस गरे। अस्पतालले कम्तिमा ३ हजार लिने रहेछन्। कुनैकुनै अस्पतालले त १२ हजारसम्म पनि माग गरे। ३ हजार, ५ हजार, ७ हजार १० हजार हरेक अस्पतालले आफू खुसि इन्टर्नबाट पैसा लिने पाईयो। त्यो अस्पताललाई बुझाउने रकममा खाजा खर्च, गाडिभाडा जोड्यो भने ४५ दिनको इन्टर्नसिपमा १० देखि १५ हजार त कम्तिमा पनि खर्च हुने रहेछ। हरेक अस्पतालको फरक फरक रेट कुन आधारमा छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेको छैन।
मैले इन्टर्नसिप गरेको अस्पतालमा सोधेको थिएँ। यो इन्टर्नसिप को चार्ज चाहिँ लिनुको कारण सोध्दा इन्टर्नलाई गाइडेन्स अनि इन्टर्नले अस्पतालबाट लैजाने डाटा र सुचनाको लागि लिएको हो, यो पहिलेदेखि नै लिने गथ्र्यौँ अनि सबै अस्पतालले लिने गर्दछन भनेर जवाफ आयो। मलाई व्यक्तिगत रुपमा लाग्दैन कि इन्टर्नले पैसा तिरेर गोप्य सुचानाहरु लिएर रिपोर्ट बनाउछन्। सामान्यतया पब्लिस भैसकेका नै डाटाहरु प्रयोग गरिन्छन् जुन कुराहरु उक्त अस्पतालको डिजिटल प्लेटफर्ममा नै पाईन्छन्।
सोचौं त एकचोटी एक सामान्य परिवारको विद्यार्थी जसलाई दैनिक खाजा खान सोचिरहनु परेको छ, उसलाई यो कतिको सहज होला? अनि के उसले अब राम्रो स्वास्थ्य संस्था जसले इन्टर्नसिप चार्ज बढी लिन्छ त्यहाँ उसलाई ठाउँ नभएकै हो त? यसले त एउटा असमानता को खाल्डो नै बनाउने भएन र?
अस्पतालहरुले पैसा लिए अनुसारको इन्टर्नलाई विशेष अनुगमन र इन्टर्नको सिकाइमा जोड पनि त दिनुपर्ने हो तर के त्यो भैरहेको छ त? म र मेरा अन्य साथीहरुको अनुभवमा भने त्यति सोचेको जस्तो प्रभावकारी इन्टर्न हुन सकेन।
नेपालमा बैंक लगायतका अन्य संस्थामा इन्टर्नलाई कम्तिमा खाजा खर्च दिने भने चलन छ। यता भने उल्टै त्यति महँगो पैसा तिरेर इन्टर्न गर्दा के उत्प्रेरणा मिल्ला र? एकचोटी विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्ने हो कि? यसलाई विश्वविद्यालय, कलेज लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
-(लेखक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थी हुन्)
स्वास्थ्य बीमा: कसरी लिने सेवा सुविधा स्वास्थ्य बीमा दर्ता गर्ने बेलामै सम्बन्धित परिवारको सम्पुर्ण बीमित सदस्यहरुलाई क्युआर कोड सहितको छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान गरिन्छ। मंगलबार, जेठ ३, २०७९
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बधाई जब चरिकोटमा मिति २०७३ सालमा एउटा घटना घट्यो जसबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित हुनुपर्‍यो। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु लामबद्ध भएर 'हामी दोषी हौँ, अपराधी हौँ' भनी हात जोडेको भिडियो सार्वजनिक भयो। बुधबार, वैशाख २८, २०७९
स्वास्थ्य बीमा: नागरिकलाई राज्यले दिएको एक वरदान सामान्य अर्थमा रोग नलाग्नु नै स्वस्थ हुनु बुझिन्छ। तर यथार्थमा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रुपले स्वस्थ हुनुलाई स्वास्थ्य भनिन्छ। स्वस्थ हुनुलाई खानपान, वातावरण, हावापानी, आनीबानी लगायतका तत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छन्। बुधबार, वैशाख २८, २०७९
सिकलसेल एनेमियाका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न माग १४ मिनेट पहिले
सरकारले प्रत्येक वडामा सामुदायिक नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने ५१ मिनेट पहिले
दक्षिण कोरियामा एकैदिन ९ हजार बढी कोरोना संक्रमित थपिए २ घण्टा पहिले
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा निःशुल्क एम्बुलेन्स सुरु २ घण्टा पहिले
जंगली च्याउ खाँदा बुटवलमा १५ जना बिरामी ३ घण्टा पहिले
तपाईंको खुट्टा धेरै निदाउँछ? यी रोगका लक्षण पनि हुनसक्छ १० घण्टा पहिले